Skippers Club Booster Club Su'aalaha | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Waa maxay Naadiga Buusliyeyaasha Booliyeyaasha?
Yuu u shaqeeyaa Naadiga Booster Skuppers Club?
Miyaan ka iibsan karaa deeqda xubinnimada khadka tooska ah?
Waa maxay deeqda ugu yar?
Canshuurta ku-deeqidda xubinnimada ma laga goynayaa? Codka jamhuuriyadda soomaaliya
Ma inaan tabaruc ahaadaa haddii aan xubin ka noqdo?
Waxaan horeyba u taageeray naadi kobciya (kubada cagta, tennis, track, tiyaatar, kooxda socodka, iwm). Maxay tahay sababta aan sidoo kale lacag u siiyaa Naadiga Booster-ka ee Booster?
Maxaan xubin uga noqon karaa haddii ilmahaygu dhigto dugsiga dhexe?
Sideen uga qaybqaadan karaa Naadiga Booster-ka ee loo yaqaan 'Skippers Booster Club' iyo nooca fursadaha iskaa wax u qabso ah ee la heli karo?
Naadiga buusterku ma yahay bakhaarka xoojiyaha?
Halkee ku yaal Bakhaarka Kaydinta
Sidee Skippers Booster Club lacag ugu ururiyaan?
Dukaanka buusterka ma lagu iibiyaa dharka dugsiyada dhexe?
Naadiga Skippers Booster Club waa urur aan macaash doon ahayn oo la bilaabay 1973.
Waxaan nahay Naadiga Booster-ka ee ugu dheereeya taariikhda Degmadeena. Koox ka mid ah xubnaha bulshada ayaa arkay baahida loo qabo in la siiyo taageero dheeri ah ardayda labada waxqabad ee ciyaaraha iyo kobcinta ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxay rumeysnaayeen in ardayda firfircoon ee firfircoon ay sida caadiga ah kasbadaan buundooyin wanaagsan oo ay dareemaan kalsooni badan iyo inay ku xiran yihiin dugsigooda. Taageerada aan sii wadno inaan siino waxtarrada ma ahan oo keliya ardayda da'da dugsiga sare, laakiin sidoo kale arday kasta oo Minnetonka ah oo ka faa'iideysta qalabka iyo qalabka dugsiga sare. Guga kasta waxaan ka helnaa codsiyo maaliyadeed ururada ardayda kala duwan ee Dugsiga Sare ee Minnetonka, oo ay ku jiraan kuwa leh naadiyo u gaar ah. Lacagta waxaa laga soo ururiyey Deeqaha Xubinimada Kordhinta, Iibsashada Bakhaarka Kaydinta iyo munaasabadaha lacag-ururinta ee dheeraadka ah. Sannad kasta waxaan siinnaa maalgelin in ka badan 30 naadi iyo waxqabadyo kala duwan. Kulankaan waxaa laqabtaa bisha Juun, dhamaan xubnaha naadiga waxay xaq u leeyihiin inay ka codeeyaan kulankaas. Taageeradeenna dhaqaale la'aan, qaar ka mid ah naadiyada ka jira MHS ma jiri karaan.
Waxaan u aruurineynaa lacag dhammaan naadiyada manhajka iyo waxqabadyada ay taageeraan Waaxda Waxqabadyada Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan tababarayaasha iyo la taliyayaasha inay soo buuxiyaan foomka Codsiga Maalgelinta horraanta Maajo. Kulankeena qeybinta lacagaha ee bisha Juun, codsiyadaan waxaa loo soo jeediyay guddiga iyo xubnaha naadiga. Ka dib markii si taxaddar leh loo tixgeliyo loona codeeyo guddiga iyo xubnaha naadiga, lacagaha waxaa la siiyaa naadiyada shaqsiyaadka codsaday. Lacagta badan ee aan ururinno sanadka oo dhan, codsiyada badan ee aan fulin karno!
Si aad u aragto naadiyada ay heleen qeybinta maaliyadeed sanadkan ka fiiri tabka Qaybinta Maaliyadeed boggeena.
Haa. Xubinnimada khadka tooska ah waa sahlan tahay. Wax walba waxaad ku sameyn kartaa si elektaroonig ah adoo gujinaya halkan ama kaliya nagala soo xiriiri kara bogga hore ee Dugsiyada Minnetonka. Dhagsii Waxqabadyada ka dibna Kordhi Kooxaha. Halkaas waxaad ka heli doontaa liistadayada oo ku geyn doonta boggayaga naadiga ee Club halkaas oo aad ka iibsan karto Deeqo Xubinnimo iyada oo loo marayo RevTrak oo leh kaarka deynta ama foomka ku daabac oo noo soo dir boostada.
Heerarka Xubinnimada Shaqsi iyo Qoys waxay ka bilaabmaan $ 25. Ku tabarucida xubinimadaada waxay siisaa taageero maaliyadeed dhammaan naadiyada xayiraadda la saaray iyo dhaqdhaqaaqyada dhaqaale doonka ah. Ku tabarucida xubinimadaada ayaa sidoo kale kuu oggolaaneysa inaad u codeyso arrimaha kana qeyb gasho shirarka billaha ah haddii aad sidaas doorato.
Haa. Waxaan nahay 501 (c) 3 urur aan faa'iido doon ahayn.
Maya. Markii aad iska diiwaangeliso xubin deeq bixiye ah waxaad ballanqaadaysaa oo keliya deeq lacageed oo kaa caawinaysa taageeridda dhammaan waxqabadyada manhajka ee Dugsiga Sare ee Minnetonka.
Si kastaba ha noqotee, marwalba waa lagugu soo dhaweynayaa inaad kaqeyb gasho shirarkeena billaha ah oo aad kaqeyb gasho.
Naadiga Skippers Booster Club wuxuu maalgeliyaa DHAMMAAN waxqabadyada manhajka wada leh, xitaa kuwa leh naadiyada kobciya ee u gaarka ah. Tusaale ahaan, waxaan u qaybinay lacag kooxdii taraafikada ee taraafikada caqabado iyo boodbood sare. Isla mar ahaantaana, waxaan awoodnaa inaan faafinno lacagteenna si aan sidoo kale u caawinno naadiyada xiisaha gaarka ah yar sida Earth Club, Breezes Newspaper, Architectural Challenge iyo Backtack Tutoring, kuwaas oo dhammaantood aan jiri karin haddii aan la helin taageerada maaliyadeed. Sidaa darteed, waxaa muhiim ah in laga fiirsado ku-deeqidda xubinnimada ee loo yaqaan 'Skippers Booster Club' iyo sidoo kale howlaha waaweyn ee aad horayba u taageertay.
Bilaabida taageerida Naadiga Booster Club ee dugsiga dhexe waa habka ugu wanaagsan ee lagu sii wadi karo dhaxalka taageerida manaahijta iskuulka ee Minnetonka High School. Waxaa jira arday badan oo dhigata dugsiga dhexe oo hadda ka faa'iideysta qalabka iyo agabyada aan ka soo iibsannay naadiyada iyo howlaha Dugsiga Sare ee Minnetonka. Qaarkood waxay horey ugaqaybqaateen barnaamijyada dugsiga sare ama Community Ed. Sidoo kale, inta badan qalabka aan soo iibsanay halkaan ayey joogi doonaan waqti dheer oo soo socda sidaa darteed ardaygaaga dugsiga dhexe wuxuu ka faa'iideysan doonaa mustaqbalka dhow.
Waxaan had iyo jeer raadineynaa dad kaqeybqaata caawinta aag iyaga xiiseynaya. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira boosas furan oo dhan Guddiga Agaasimayaasha naadiga oo ay weheliyaan fursado hadh leh dhammaan heerarka adeegga ee naadiga dhexdiisa. Fadlan kafiiri boosaska furan hoosta tabta Xubnaha Guddiga iyo sharraxaadda booska hoosta tabka Fursadaha Tabaruca ee ku yaal degelkeenna.
Naadiga Skippers Booster Club waa hay'adda maamusha Bakhaarka Boostooyinka lagu kaydiyo. Bakhaarku wuxuu ku hoos yimaadaa dalladda Booster Buster. Dhammaan wixii ka soo xarooday Bakhaarka oo ay weheliso Deeqaha Xubinnimada iyo dadaalladayada kale ee lacag-ururinta waxay bixiyaan miisaaniyadda ugu dambeysa ee sannadka loo qaybiyo dhammaan naadiyada codsada deeqda.
Bakhaarka buusterka wuxuu si habboon ugu dhex yaal Ururka Ardayda ee Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxaad ka heli kartaa midkood Galbeedka ama Galitaanka Guud. Waxaan ku xignaa Xafiiska Hawlaha. Bakhaarku wuxuu furan yahay 11ka subaxnimo ilaa 2-da duhurnimo maalin kasta oo iskuulku socdo. Waxaan sidoo kale furan nahay Sabtiyada qaar iyo dhacdooyin badan oo gaar ah. Saacadahan waxaa badanaa lagu dhajiyaa tabkeena Booster Store oo ku yaal boggayaga internetka.
Waxaan kor ugu qaadnaa taageerada maaliyadeed iyada oo loo marayo Deeqaha Xubinnimada, Iibsashada Bakhaarka Kaydinta, iyo dhacdooyinka kale ee lacag ururinta sanadka oo dhan.
Waqtigan xaadirka ah waxaan ku iibinaa badeecada dukaankeena Booster ee ku yaal Dugsiga Sare ee Minnetonka. Waxaan ku sameeynaa shay alaab ah tirade dhalinyarada laakiin inta badan ardayda dugsiga dhexe waxay ku habboon yihiin qiyaastayada guud. Waxaan ka shaqeyneynaa bixinta bakhaarrada "pop up" ee MMW iyo MME dhacdooyinka gaarka ah sida Soo-noqoshada iyo Xilliga Jiilaalka. Waxaad ka heli kartaa ku saabsan dallacsiinta gaarka ah adoo aadaya degelkeenna degmo oo gujinaya tabka Buuster Store.